Qaababka Cilmi-baarista Decolonising - AfricArXiv
Asal ahaan waxaa lagu daabacay: steps-centre.org/blog/how-do-we-decolonise-research-methodologies/
About the Author: Joel Onyango
Gooni-goosadku waa geeddi-socod joogto ah oo halganka gumeysi-diidka ah ee lagu sharfayo hababkii asaliga ahaa ee lagu ogaanayay adduunka, aqoonsashada dhulka asaliga ah, dadka asaliga ah, iyo madax-bannaanida asaliga ah - oo ay ku jiraan madax-bannaanida hannaanka gumaysiga (Datta, 2017). AfricArXiv waxay gacan ka gaysanaysaa gumaysiga iyadoo kobcinaysa fahamka gumaysiga iyada oo loo marayo horudhacyo; aqbalida gudbinta hordhaca ah ee lingua-franca iyo luqadaha hooyo, iyo u suurta gelinta lahaanshaha cilmi baarista Afrikaanka ee Afrikaanka iyada oo loo marayo aasaasid bakhaar diineed dijitaal ah oo ay leedahay Afrika oo qaaradda Afrika ah.
Sanadkii la soo dhaafey, faafa wuxuu diirada saarey xitaa fiiro gaar ah doorka cilmi baarista iyo cadeymaha go aan qaadashada, iyo cabirka iyo xurgufaha goobta iyo sida cilmi baarista loo sameeyo iyo cida loo qabanayo. Covid-19 wuxuu dardar galiyay hal-abuurnimada habka meelaha qaarkood, u ogolaanaya ama ku qasbaya cilmi-baarayaashu inay si kala duwan cilmi baaris ugu sameeyaan: tusaale ahaan, iyadoo loo marayo dib-u-eegis deg deg ah iyo soo saarid caddeyn ah, hababka sahaminta fog, iyo isticmaalka teknoolojiyada dijitaalka ah sida barnaamijyada internetka, bulshada warbaahinta, 'xog weyn' iyo wixii la mid ah. Tani macnaheedu maahan in tani ay tahay habka ugu doorbidsan ee lagula tacaalayo cilmi baarista hababkaan sidoo kale waxay lajiraan caqabado iyaga u gaar ah, laakiin waa tallaabo loo wajahayo hababka dib looga fekerayo.
Faafida ayaa sidoo kale ka xanaajisay cilmi baarayaal badan si ay u tijaabiyaan qaababka durugsan iyo inay qaataan qaabab kale oo wax looga qabsan karo, iyadoo suuragal ay tahay in si khaldan loogu sheego cilmi baarista miiska inay tahay cilmi baaris xeel dheer. Global South, cilmi baarayaashu waxay soo baareen macnahan qaababkan (iyo kuwa kale) ee loola jeedo duruufahooda gaarka ah, iyagoo ka tarjumaya ajandaha sii kordhaya ee cilmi baarista 'qurxinta'.
Gumeysiga ayaa loo isticmaalay in lagu sharaxo Saamaynta qaabdhismeed ee xukunka siyaasadeed ee waddammada hoos yimaada. Halganka loogu jiro 'go'doominta' ayaa ka soo ifbaxay furitaankii xukunkii gumeystaha illaa iyo xitaa caqabadda aasaasiga ah ee ka xoreynta aqoonta, dhaqanka iyo dhaqanka ka soo ifbaxa xoogagga adduunka ee awoodda haya. Marka la eego dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee gumaysiga, oo su'aal ka keenaya dhinacyada kala duwan ee gumaysiga, waxaa jira wicitaano ku saabsan qurxinta cilmi-baarista iyo ajandayaasha cilmi-baarista - kuwaas oo inta badan laga gooyo xaaladaha iyo xaaladaha maxalliga ah.
Tani waxay tusinaysaa ajendeyaasha cilmi-baarista ee maxalliga ah, oo loo adeegsado aqoonta maxalliga ah, oo ay ku jiraan doodaha ku saabsan fikradaha laga qabo aqoonta, qiyamka iyo caqiidooyinka cilmi-baarista ee Koonfurta adduunka.
Talooyin ku saabsan qoraaga
Gumeysi Dejinta Fahamkeenna Iyo Xaaladda Koonfurta Dunida
- U furitaanka meel fikirka xorta ah
- Furitaanka goobo si loo naqdiyo jagooyinka awoodda iyo dhaqanka
- Tixgelinta xiriirka cilmibaaraha iyocilmibaare'(qofka ugu weyn ee cilmi baaristu beegsaneyso)
- Kala saaridda xiisadaha edbinta iyo isku dhacyada
- Decoloniality waa noocyo badan
Sideen U Qurxin Karnaa Hababka Cilmi Baarista?
- Ku darso, fududee oo isu keen doodaha ku saabsan murugsanaanta gumaysiga
- (Re) qiimee socodka socodka maalgalinta cilmi baarista
- Tixgeli aragtiyada kala duwan ee adduunka ee wax lagu qorayo xil
- Diiwaangelinta kiisaska ka hor imanaya heerka caadiga ah
- Kala saarida / habeyn nidaamyada sahlaya cilmi baarista
Faahfaahinta, fadlan tixraac: steps-centre.org/blog/how-do-we-decolonise-research-methodologies/
Dhibcaha sawirka: Webiga Buba ee Guinea-Bissau, Afrika (Flickr / remusshepherd / cc by 2.0)
Ku saabsan Xarunta STEPS
ESRC STEPS (Dariiqyada Bulshada, Teknolojiyada iyo Deegaanka ee Joogtaynta) Xarunta waxay fulisaa cilmi baaris caalami ah oo isku dhafan oo mideysa daraasadaha horumarka ee cilmiga sayniska iyo tikniyoolajiyadda. Hadafkeenu waa inaan muujinno, shaaca ka qaadno oo aan wax ku biirino dariiqyada cadaalad iyo dimuqraadiyadeed ee waara oo ay ku jiraan baahiyaha, aqoonta iyo aragtiyada dadka saboolka ah iyo kuwa la hayb sooco.
Categories:	Aqoonta asaliga ahKala Duwanaanta LuqaddaFuran Furan
Tags: Baaritaan Afrikan ahQurxinqurxintaResearch